Mako 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
9 Uyezve, akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Pane vamwe vamire pano vasingazomboraviri rufu kusvikira vatanga vaona umambo hwaMwari hwatouya nesimba.”+ 2 Naizvozvo kwapera mazuva matanhatu Jesu akaenda naPetro naJakobho naJohani, akakwira navo mugomo refu refu vari voga. Zvino akachinja chitarisiko pamberi pavo,+ 3 nguo dzake dzokunze dzikan’aima, dzikachena kwazvo zvokuti hapana mugezi wenguo panyika aigona kudzichenesa zvakadaro.+ 4 Uyewo, ivo vakaona Eriya naMosesi, uye vakanga vachikurukura naJesu.+ 5 Saka Petro akabva ati kuna Jesu: “Rabhi, zvakanaka kuti tive pano, naizvozvo ngativakei matende matatu, rimwe renyu, rimwe raMosesi uye rimwe raEriya.”+ 6 Chokwadi, iye haana kuziva kuti oita sei, nokuti vakatya kwazvo. 7 Zvino gore rakavapo, richivafukidza, uye inzwi+ rakabva mugore richiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu,+ anodiwa; muteererei.”+ 8 Zvisinei, vakabva vangotarira-tarira uye hapana wavakaona akanga achiri pamwe chete navo, kunze kwaJesu oga.+ 9 Zvavakanga vachiburuka mugomo, akavarayira zvakajeka kuti varege kurondedzera+ kuvanhu zvavakaona, kusvikira Mwanakomana womunhu amuka kubva kuvakafa.+ 10 Zvino ivo vakachengeta shoko racho mumwoyo, asi vakataurirana chairehwa nouku kumuka kubva kuvakafa. 11 Vakatanga kumubvunza, vachiti: “Nei vanyori vachiti Eriya+ anofanira kutanga kuuya?”+ 12 Iye akati kwavari: “Eriya anotanga kuuya odzorera zvinhu zvose;+ asi sei zvakanyorwa pamusoro poMwanakomana womunhu kuti anofanira kutambura zvinhu zvizhinji+ obatwa seasingakoshi?+ 13 Asi ndinoti kwamuri, chokwadi Eriya+ akauya, uye vakamuitira zvinhu zvizhinji sezvavaida, sokunyorwa kwazvakaitwa pamusoro pake.”+ 14 Zvino, pavakanga vava kuda kusvika kwaiva nevamwe vadzidzi, vakaona boka guru revanhu rakavapoteredza uye vanyori vachiita nharo navo.+ 15 Asi boka rose revanhu parakangomuona rakashamiswa kwazvo, uye, vachimhanyira kwaari, vakatanga kumukwazisa. 16 Iye akavabvunza kuti: “Muri kuita nharo dzei navo?” 17 Mumwe wevaiva muboka racho revanhu akamupindura kuti: “Mudzidzisi, ndauya nomwanakomana wangu kwamuri nokuti ane mudzimu unoita kuti munhu asataura;+ 18 uye pose paunomubata unomurovera pasi, anopupa furo, ogeda-geda mazino, opera simba. Ndaudza vadzidzi venyu kuti vaudzinge, asi havana kukwanisa.”+ 19 Achipindura, iye akati kwavari: “Haiwa imi chizvarwa chisina kutenda,+ ndinofanira kuramba ndinemi kusvikira rini? Ndinofanira kukushivirirai kusvikira rini? Uya naye kwandiri.”+ 20 Naizvozvo vakaenda naye kwaari. Asi mudzimu wacho pawakamuona wakabva waita kuti mwana wacho agwinhe, uye pashure pokunge adonhera pasi akaramba achiumburuka, achipupa furo.+ 21 Zvino akabvunza baba vake kuti: “Izvi zvave zvichiitika kwaari kubvira rini?” Ivo vakati: “Kubvira achiri muduku; 22 uye kazhinji waimukanda mumoto nomumvura kuti umuparadze.+ Asi kana paine chamunogona kuita, tinzwirei tsitsi, mutibatsire.” 23 Jesu akati kwaari: “Kutaura ikoko kwokuti, ‘Kana muchigona’! Chokwadi, zvinhu zvose zvinogoneka kumunhu kana munhu wacho aine kutenda.”+ 24 Baba vomwana wacho muduku vakabva vashevedzera vachiti: “Ndine kutenda! Ndibatsirei pandinoda kutenda!”+ 25 Zvino Jesu achiona kuti boka revanhu rakanga richimhanyira kwavari, akatuka+ mudzimu wacho usina kuchena, achiti kwauri: “Iwe mudzimu unoita kuti munhu asataura uye ave matsi, ndinokurayira, buda maari uye usapindazve maari.” 26 Zvino pashure pokunge washevedzera uye waita kuti agwinhe kazhinji, iwo wakabuda;+ uye iye akaita seafa, zvokuti vazhinji vavo vakanga vachiti: “Afa!” 27 Asi Jesu akamubata ruoko, akamusimudza, uye iye akasimuka.+ 28 Naizvozvo pashure pokunge apinda mune imwe imba vadzidzi vake vakamubvunza vari voga kuti: “Nei tanga tisingagoni kuudzinga?”+ 29 Iye akati kwavari: “Rudzi urwu harugoni kubuda nechimwe chinhu kunze kwokushandisa munyengetero.”+ 30 Vakabva ipapo, vakaenda nomuGarireya, asi haana kuda kuti chero munhu upi zvake azvizive. 31 Nokuti akanga achidzidzisa vadzidzi vake, achivaudza kuti: “Mwanakomana womunhu achaiswa mumaoko evanhu, uye vachamuuraya,+ asi, pasinei nokuurayiwa, iye achamuka kwapera mazuva matatu.”+ 32 Zvisinei, vakanga vasinganzwisisi mashoko acho, uye vaitya kumubvunza.+ 33 Ivo vakasvika muKapenaume. Zvino paakanga ava mumba akavabvunza kuti: “Manga muchiitirana nharo pamusoro pei mumugwagwa?”+ 34 Ivo vakaramba vakanyarara, nokuti mumugwagwa vakanga vaitirana nharo dzokuti ndiani aiva mukuru.+ 35 Naizvozvo akagara pasi, akashevedza vane gumi nevaviri, akati kwavari: “Kana munhu achida kuva wokutanga, anofanira kuva wokupedzisira pane vamwe vose nomushumiri wevamwe vose.”+ 36 Zvino akatora mwana muduku, akamumisa pakati pavo, akamugumbatira, akati kwavari:+ 37 “Munhu wose anogamuchira mumwe wevana vaduku vakadai nokuda kwezita rangu, anondigamuchira; uye munhu wose anondigamuchira, haagamuchiri ini chete, asiwo iye akandituma.”+ 38 Johani akati kwaari: “Mudzidzisi, taona mumwe murume achidzinga madhimoni achishandisa zita renyu uye taedza kumudzivisa,+ nokuti anga asiri kufamba nesu.”+ 39 Asi Jesu akati: “Musaedza kumudzivisa, nokuti hapana munhu angaita mabasa esimba nezita rangu angakurumidza kundituka;+ 40 nokuti asingapesani nesu ndowedu.+ 41 Nokuti munhu wose anokupai kapu+ yemvura yokunwa nokuti muri vanhu vaKristu,+ chokwadi ndinokuudzai kuti, haangamborasikirwi nomubayiro wake. 42 Asi munhu wose anogumbura mumwe wevaduku ava vanotenda, zvaizomunakira kwazvo kudai guyo rakaita seriya rinotenderedzwa nembongoro raizosungirirwa mumutsipa make obva akandwa mugungwa.+ 43 “Zvino kana ruoko rwako rukaita kuti ugumburwe, rugure; zvakanaka kwazvo kuti upinde muupenyu wakaremara pane kuti upinde muGehena uine maoko maviri, mumoto usingagoni kudzimwa.+ 44 —— 45 Zvino kana tsoka yako ichiita kuti ugumburwe, igure; zvakanaka kwazvo kuti upinde muupenyu uchikamhina+ pane kuti ukandwe muGehena+ uine tsoka mbiri. 46 —— 47 Zvino kana ziso rako richiita kuti ugumburwe, rirase;+ zvakanaka kwazvo kuti upinde muumambo hwaMwari uine ziso rimwe chete pane kuti ukandwe muGehena+ uine maziso maviri, 48 umo honye dzezvitunha zvacho dzisingafi uye moto usingadzimwi.+ 49 “Nokuti munhu wose anofanira kurungwa+ nomoto. 50 Munyu wakanaka; asi kana munyu ukapererwa nokuvavira kwawo, muchaurunga nei?+ Ivai nomunyu+ mamuri, muchengete rugare+ pakati penyu.”